BaHuThuTaGabar - Page2of 233 - Welcome to Bahuthutagabar
မင်္ဂလာပါ 2019နှစ် (11)လပိုင်း တနင်္ဂနွေ ၊ တနလာ င်္အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း…
မင်္ဂလာပါ 2019နှစ် (11)လပိုင်း တနင်္ဂနွေ ၊ တနလာ င်္အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း… 1.11.2019 မှ 30.11.2019 ထိ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်…. သင်၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like& Share ပေးကြပါ….. […]
“(၂ဝ၂ဝ)ပြည့် ခုနှစ် သောကြာ သားသမီများအတွက် တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း”
သောကြာ သားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်ရမည်။ မိမိကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝထားရှိသူ ဖြစ်ပါက ဘဝအတွက် အောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်က လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက် ရှိနေပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူဆိုလျှင် ရင်းနှီးမြှင်နှံမှု အစုစုကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြု လုပ်နိုင်ပါသည် …။ ယခုနှစ်တွင်(၁၅-၁-၂၀၂၀)မှ စ၍(၁၅-၃-၂၀၂၀)အထိ စီးပွားရေးများ သတိနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်းအတိုက်အခံများနှင့်ကြုံ […]
“ပန်းနာရင်ကျပ် တသက်လုံး ရာသက်ပန် ပျောက်ဆေးနည်း…”
ပန်းနာရင်ကျပ် တသက်လုံး ရာသက်ပန် ပျောက်ဆေးနည်း ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါရှိသူများအတွက် တစ်သက်လုံးပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်းကောင်းပေးလိုက်မည် ။ မိတ္ထိလာမြို့မှ အဘိုးကြီးတဦး နှစ်နှစ်ကြာကြာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ဖြစ်နေခဲ့ရာလူပြောများ၍ ပဲစဉ်းငုံ အလုံးလိုက် တစ်နေ့နို့ဆီဘူး တလုံးကျ ပြုတ်၍ ဆားခတ်ပြီး အစမ်းသဘောဖြင့်နေ့စဉ်စားနေခဲ့သည် ။ စားနေရင်း နေရထိုင်ရတာ သက်သာလာပုံ […]
“ခရုသင်းကို မူလအသားရေအတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဆီမီးတောက်ပင် အစွမ်း”
“ခရုသင်းကို မူလအသားရေအတိုင်း ပြန်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဆီမီးတောက်ပင် အစွမ်း” ခရုသင်းဆိုတာ အရေပြားရောဂါ မှိုတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်လက်ခြေ အစိတ်အပိုင်းတို့မှာ သွေးသားမသန့်ရှင်းတဲ့အခါ အရေပြားမှာ အဖြူကွက်ကြီးများကို ခရုသင်းအဖြစ် တွေ့နေရတယ်။ ဒီလို ခရုသင်းကွက်တွေ ပျောက်ဖို့ ဆေးနည်း လိမ်းဆေး မျှဝေပါရစေ။ ဆီမီးတောက် (C […]
ကား အမည်ပြောင်း လျှောက်ရန်…ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ သိရှိလာရသည်များကို မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကား အမည်ပြောင်း လျှောက်ရန်…ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ သိရှိလာရသည်များကို မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ (သိပြီးသောသူများ အတွက်မဟုတ်ပါ။ စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် ဘယ်သွားပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဟု သိချင်နေသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသည့်ကိစ္စ မဟုတ်သော်လည်း procedure ကို မသိပါက ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေသော ကညနရုံးတွင် ၂ ခါပြန် တန်းစီရလျှင်ပင် အတော်ပင်ပန်းပြီး စိတ်ပျက်ရပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ […]
လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းကြောင့် 48 နာရီအတွင်း မြန်မာပြည် အနှံ့ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်
လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းကြောင့် 48 နာရီအတွင်း မြန်မာပြည် အနှံ့ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းကြောင့် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း အချို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းကနေ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်မယ်လိုိ့ မိုးဇလက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက် ၆ နာရီခွဲ တိုင်းထွာချက်အရ […]
(၉) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံ အစအဆုံး ထီထိုးထားလျှင် ထီတိုက်ပါ
(၉) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ထီပေါက်စဉ်နံပါတ်များ အပြည့်အစုံကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ယခု Post ကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ သင့်ရဲ့နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို #Share လိုက်ပါ။ 🤗 #MoeyanlotteryMyanmar #Moeyanlotteryenterprice #အောင်ဘာလေ #သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် သိန်း ၁၅၀၀၀. ယ ၈၁၇၄၀၂. မိုးယံ […]
“ငါးထပ်ကြီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီး၊ ကိုးထပ်ကြီးဘုရား အဓိပါယ်”
“ငါးထပ်ကြီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီး၊ ကိုးထပ်ကြီးဘုရား အဓိပါယ်” ရန်ကုန်မြို့မှာ ငါးထပ်ကြီး ၊ ခြောက်ထပ်ကြီး နဲ့ ကိုးထပ်ကြီး ဘုရား ၊ ပြည်မြို့မှာ ဆယ်ထပ်ကြီး ဘုရား စသည်ဖြင့် ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဘုရားများမှ ‘ထပ်ကြီး’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မသိတဲ့သူများပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အစက […]
တစ်ပတ်စာ (၇)ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း 31.10.2019 မှ 06.11.2019 အထိ
31.10.2019 မှ 06.11.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ (၇)ရက် သားသမီး ဟောစာတမ်း (၇)ရက် သားသမီးအပေါင်း ကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝကြပါစေ… တနင်္ဂနွေ … ဒီကာလအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ခြင်းတွေ၊ အသစ်လဲလှယ်ခြင်းတွေ ဆောင်ရွက်လို့ ကောင်းပါတယ်။ နာမည်ကောင်းနှင့် ကျော်ကြားတတ်တဲ့ ကာလပါပဲ။ […]
“တနင်္ဂင်္နွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ၁၁ လပိုင်းတစ်လစာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း”
တနင်္ဂင်္နွေ သားသမီးများအတွက် လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ န်ိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ ရဟန္တာပုံတော်များ […]